allsanaag.com - Madaxweyne Culusoow iyo Xulafadiisii oo London soo gaaray
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3207	Days	20	Hours	04	Minutes	38	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Madaxweyne Culusoow iyo Xulafadiisii oo London soo gaaray
Written by khalid	Madaxweyne Xasan Culusoow iyo wasiirul dawlaha madaxtooyada Soomaaliya Mooryaan Diimeed Farax Cabdulqaadir ayaa soo gaaray London.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Culusoowiyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay soo gaareen caasimadda Dalka Ingriiska ee London.
Waxaa safarkan Madaxweynaha ku wehliyo R/Wasaare Ku Xigeenka ahna Wasiirka arimaha dibadda iyo iskaashiga Caalimiga Fawziyo Yusuf Adam,Wasiirul Dowlaha Madaxtooyadda Mooryaan diimeed Faarax Cabdul-Qaadir, la taliyayaasha Madaxweynaha, iyo saraakiil ka tirsan Villa Soomaaliya oo ka soo wada jeeda hal Beel
Raisawasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax iyo labada Wasiir oo ka soo jeeda beeshiisa iyagu caawa waxay ku sugan yihiin gobolka shabeelaha hoose.